नरेन्द्र थापालाई रिस उठेपछि... - नागरिक रैबार
मलाई रिस उठ्छ ।
मेरै आखा अगाडी
प्रत्येक दिन नगरपालिका असफल भइरहेछ ।
लुट मच्चिरहेछ ।
आगलागीको वार्षिक कार्यक्रम
लागु गरिदै छ ।
त्यो देखेर मलाई असाध्यै
जनताको पैसामा प्राविधिक
प्रत्येक वर्ष तराईमा घडेरी
जनताको कर तिरेको
पैसाको कुनै रेकर्ड छैन।
सेटिंग चलाउने स्वतन्त्रताको
भरपूर फाइदा उठाइरहेछन्।
अझ अचम्मको कुरा त के भने
जनताको पैसा खान पाइदैन भन्दा
पार्टीमा गरेको योगदान सम्झाउछन्।
थाहा छैन उसले करोडौ खाएर
केही थान अमूक मान्छेलाई दुईचार
रूपैया दिएर कहिले सम्म पार्टी चल्ने हो?
मेरै आखा अगाडी सबै भइरहेछ।
मेरा हातहरू कथित कानुनले बाधेकाछन्
त्यसैले मलाई रिस उठ्छ।
मिलेमतोमा जनताको पैसा
यसरी खाईन्छ मानौ
यो नै नियती हो।
यो नै विधि हो।
यो नै कानुन हो।
यो उसको अधिकार हो।
जिम्मेवार मान्छे यसरी बोल्छ।
मानौ यो जुवाको खाल हो।
जड्याहाको भट्टी हो।
खलालीहरूको भेला हो।
यो गजराउलो हो।
यो वेश्यालय हो।
जहा जसलाई जे मन लाग्छ।
त्यो बोल्छ, गर्छ, हिड्छ।
म यस्तो समयको वात गरिरहेछु।
जहा, चोर योजना बनाउछ, पुलिस चोर्छ।
जनप्रतिनिधि योजना बनाउँछ।
अख्तियार, कोलेनी कमिसन उठाउछ।
डाक्टर व्यापार गर्छ।
भ्रष्टहरू, व्यविचारीहरू, नैतिक हरामहरू
बहुमत बनाउन जुट्छ।
न्यायालय आँखामा पट्टी बाधेर
सोझासाझ जनता कुट्छ।
मलाई रिस उठ्छ।
ति तमाम सहिदहरू देखेर
ति तमाम क्रान्तिकारीहरू देखेर
ति वलिदानि देखेर
त्यो त्याग देखेर
के सही के गलत
छुट्याउन नसक्ने जनता देखेर
आँखामा पट्टी बाधेका कार्यकर्ता देखेर
विवेक र जिम्वारीबोध विहिन विद्वान देखेर
चुपचाप भलाद्मी देखेर
यीनका छातिमा नपड्केको बन्दुक देखेर
भ्रष्टचारी घरमा नपरेको चट्यांड देखेर
व्यविचारीमा नलागेको महामारी देखेर
पिडकलाई नसराप्ने देवता देखेर मलाई
मलाई अचेल रिस उठ्छ।
के तिमीलाई पनि रिस उठ्छ ?
सहवीर थापाकाे सामाजिक सञ्जालबाट साभार
मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाजको सहयोगमा अति बिपन्न दुई परिवारलाई खाद्यान्न
राजेन्द्र बहादुर रोकाया बाजुरा । मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाजको आर्थिक सहयोगमा अति बिपन्न दुई परिवारलाई खाद्यान्न सहयोग गरिएको छ । जिल्लाको बुढीगंगा नगरपालिका ६ का अति बिपन्न दुई परिवारका लागी आज दश हजार बराबर नगद तथा खाद्यान्न सहयोग गरिएको छ । बुढीगंगा नगरपालिका ६ कि जानकी बोहरा बिरामी भएर जिल्ला अस्पताल बाजुरामा उपचार गराउन […]
बेलिव्रिज आउँदै गर्छ, अहिलेलाई काठे साँगु
राम बहादुर विक/बाजुरा २६ भदौ । गत साउन २५ गते राति अविरल बर्षासंगै बुढीगंगा नदिमा आएको बाढीले जडाङ्गामा रहेको बेलिव्रिज बगाएपछि साँफे-मार्तडी सडकको सम्वन्ध विच्छेद भएको थियो । बाढीले उतm ठाँउमा रहेको बेलीब्रिज पुल बगाएपछी स्थानियहरुलाई आवत जावत गर्न निकै सास्ती खेप्नु परेको थियो ।स्थानियहरुले सास्ती खेपी रहेको केही दिन पछी बडिमालिका नगरपालिका वडा ५ […]
जडाङ्गापछि सेरामा पनि तुईनबाट आवात-जावत गरिदै
नागरिक रैबार/बाजुरा १९ भदौ। बुढीगंगा नदिमा आएको बाढीका कारण ताँप्रीसेराको पुल बगाएपछि आवत जावत गर्न स्थानीयहरुले उक्त ठाउँमा तुईन जडान गरेका छन् । करिव डेढ महिना अघि बाढीका कारण ताँप्रीसेराको पुल बगाएपछि साविकको कैलाशमाण्डौं जाने र आउने स्थानीयलाई समस्या हुँदै आएको थियो । पुल बगाएपछि कैलाशमण्डौं जाने स्थानीयहरु एक घण्टाको पैदल यात्रा गरेर बल्दे नजिकैकोे […]
मुख्यमन्त्रीको टोलीले दियो बाढी प्रभावित परिवारलाई राहत
नागरिक रैबार/बाजुरा १८ भदौ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टसहितको टोलीले बाढी प्रभावित परिवारलाई राहत वितरण गरेको छ । विहिबार मुख्यमन्त्री सहितको टोलीले अछाम र बाजुरा जिल्लाका बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन सहित बाढीपहिरोबाट प्रभावित बनेका परिवारलाइ राहत वितरण गरेको हाे । मुख्यमन्त्रि सहितको टोलीले बाजुरामा गत साउन २५ गते र भदौ २ गते […]
सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री भट्ट सहितको टोली बाजुरा आउँदै
नागरिक रैबार/बाजुरा १८ भदौ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट सहितको टोली अछामको रामारोशन र बाजुराको बाढी पहिरोे प्रभावित क्षेत्रमा अनुगमन गर्न आउने भएका छन् । अविरल वर्षासंगै बाढी पहिरोका कारण क्षेती भएको अछामको रामारोशन गाउँपालिका र बाजुराको त्रिवेणी, बुढीगंगा, बुढीनन्दा र बडीमालिका नगरपालिका र गौमुल गाउँपालिकाका विभिन्न प्रभावित ठाउँको स्थलगत अनुगमन गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री […]
चर्चित विद्यार्थी थापालाई गृह जिल्ला बाजुरामा भव्य स्वागत
नागरिक रैबार/बाजुरा १७ भदौ। त्रिभुवन विश्व विद्यालयका चर्चित युवा विद्यार्थी हेमराज थापालाई गृह जिल्ला बाजुरामा भव्य स्वागत गरिएको छ । बुधबार साँझ बाजुरा सदरमुकाम मार्तडी पुगेका विद्यार्थी थापा सहितको टोलीलाई खप्तड मालिका युवा संजाल बाजुराका युवाहरुले फुलमाला, खादा र अविर लगाई भव्य स्वागत गरेकाे खप्तड मालिका युवा संजाल बाजुराका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र रोकायाले बताएका छन् […]